Xidigaha Xulka Galmudug oo afka ciidda u daray dhigooda Hirshabeelle - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Xidigaha Xulka Galmudug oo afka ciidda u daray dhigooda Hirshabeelle
Xidigaha Xulka Galmudug oo afka ciidda u daray dhigooda Hirshabeelle
Kulanka ka tirsan tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedkada oo ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa galabta foodda is daray xulalka kubadda Cagta Hirshabeelle iyo Galmudug.
Cayaarta oo ay u soo daawasho tageen dad weyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka Gobolka Banaadir, isla markaana kala taageerayay labada Xul ee Galmudug iyo Hirshabeelle isla markaana sitay hal ku dhigto ayaa muujiyay sida ay u taageersanyihiin tartamada nuucaani oo kale ah oo la xiriirta isdhexgalka bulshada.
Labada xul ayaa soo bandhigay cayaar aad u xiisa badneyd oo ay ku qanceen dhamaan dadkii u soo daawasho tagey garoonka, waxaana cayaarta qeybtii hore lagu kala nastay 1-0 oo ay la yimaadeen Xulka kubadda cagta ee Hirshabeelle.
Qeybtii labaad ee cayaarta ayaa labada dhinac waxa ay muujiyeen dadaal aad u badanbalse xidigaha kubada cagta Galmudug ayaa waxay muujiyeen is ku dayo badan oo ay ku abuureen fursado markii danbe ay ku dhaliyeed goolkoodii 1aad ee ciyaarta , ciyaarta ayaana ku dhamaatay 2-1 oo ay guushu ku raacday xidigaha kudhada cagta Galmudug.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Habeen 24-12-2020
Next articleGudoomiyaha Aqalka Sare oo Farmaajo ku eedeeyay in uu qaaday tilaabo halis ku ah dalka